सहज छैन मिर्गौलाको उपचार,पालो कुर्दा कुर्दै जान्छ ज्यान Ukeraa – Latest and featured news from Nepal.
सहज छैन मिर्गौलाको उपचार,पालो कुर्दा कुर्दै जान्छ ज्यान
धनगढी : कैलालीकी मिर्गौला पीडित प्रभा चौधरी हप्तामा दुई पटक डाइलासिस गर्न सेती प्रादेशिक अस्पताल धाउँछिन्।
२४ वर्षको उमेरमै दुवै मिर्गौलाले काम गर्न छोडेपछि उनले अस्पताल धाउन लागेको ४ वर्ष बितिसक्यो। कहिले आफन्तको साथमा त कहिले गौरीगङ्गा नगरपालिकाको चौमालाबाट एक्लै अस्पताल पुग्छिन् उनी।
‘चार वर्ष अघि म बिरामी भएर थला परेँ, खान मन नलाग्ने, हात खुट्टा सुनिने, वाकवाकी हुने भइरहेको थियो, गाउँकै अस्पतालमा जाँदा धनगढी जान भनियो, सेती प्रादेशिक अस्पतालमा चेकजाँच गर्दा मिर्गौला फेल भएको थाहा पाएँ’, अस्पतालमा डाइलासिस गराइरहेकी प्रभाले भनिन्, ‘अस्पताल धाउन थालेको पनि चार वर्ष भयो,हप्तामा दुई पटक डाइलासिस गरिरहेकी छु,बाचुन्जेल डाइलासिस गर्नु पर्दो रहेछ।’
कञ्चनपुरको लालझाँडीकी ४० बर्षीया आस्मा राना ६ सन्तानकी आमा हुन्। छैटौँ सन्तानलाई जन्म दिन सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढी पुगेकी उनमा सुत्केरी अवस्थामै मिर्गौलामा समस्या देखियो।
त्यसपछि डाक्टरको सल्लाहमा उनलाई सेती प्रादेशिक अस्पतालको माथिल्लो तलामा रहेको डाइलासिस कक्षमा लगियो। चेक जाँचको क्रममा उनको मिर्गौलाले काम गर्न छोडेको पुष्टि भयो। त्यसपछि उनी अहिले डाइलासिसको लागी पालो कुरिरहेकी छिन्।
सहज छैन सहज उपचार
प्रभामा मिर्गौला सम्बन्धी समस्या देखिँदा सुदूरपश्चिममा उपचार सम्भव थिएन। नयाँ जीवन पाउने आशामा उनी उपचारको लागी भारत गइन्। त्यतिखेर सेतीमा डाइलासिसको व्यवस्था पनि थिएन। भारतमै उनले डाइलासिस सँगै फिस्टुला भरेर एक वर्ष उतै उपचार गराइन्। सेतीमा डाइलासिस सेवा सुरु भएपछि उनले यतैबाट सेवा लिन थालिन्। त्यति बेला उनको १० लाख बढी रकम खर्च भइसकेको थियो।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मिर्गौलाको उपचार सहज छैन। सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढीमा डाइलासिसको सुविधा भए पनि प्रभावकारी नबन्दा समस्या भइरहेको छ।
सहजै उपचार सम्भव नभए पछि मिर्गौला पीडितहरू जीवन र मरणको दोसाँधमा छन्। सरकारले डाइलासिस सेवा निःशुल्क गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन। फिस्टुला भर्न तथा मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न आर्थिक स्रोत नहुँदा अस्पतालको शय्यामै प्राण त्याग्नु पर्ने बाध्यता उनीहरूको छ।
‘जीवनभर डाइलासिस नै गर्नुपर्ने रहेछ,हामीलाई मिर्गौला त कसले दिन्छ, प्रभाले भनिन्, ‘उपचार गर्दा गर्दै कुन दिन अस्पतालकै शय्यामा ज्यान गुमाउनुपर्ने हो।’
सेती प्रादेशिक अस्पतालमा डाइलासिस सेवा उपलब्ध भए पनि मिर्गौलाको फिस्टुला भर्न भने बिरामीले काठमाडौँ, नेपालगन्ज वा भारत नै जानु पर्ने बाध्यता छ। डाइलासिस सेवा पाउन निकै कठिनाइ भइरहेको कञ्चनपुरकी आस्मा रानाले बताइन्।
‘सरकारले निःशुल्क भनेको डाइलासिस प्रदेशमा शुल्क तिरेर पनि पाउन सक्ने अवस्था छैन, पालो कुर्दा कुर्दै धेरैको ज्यान गइसक्यो,उनले भनिन्, ‘पालो नपाएरै मरिने हो कि भन्ने चिन्ता छ।’ सेती अस्पतालमा डाइलासिस गराउनका लागि नाम दर्ता गरेका अधिकांश बिरामी सेवा प्रभावकारी नभएपछि सम्पर्क विहीन भइरहेका छन्।
तीन वर्ष अगाडी मात्रै सेती अस्पतालमा डाइलासिसका लागि दुई सय ५० जना बिरामीले नाम दर्ता गराएकोमा अहिले साप्ताहिक रूपमा २८ जनाले मात्रै सेवा पाई रहेका छन्।
न उपकरण न विशेषज्ञ
विगतमा सेती अस्पताल आफैँले डाइलासिस सञ्चालन गरे पनि २०७४ को चैतदेखि भने निजी क्षेत्रको विरंग हेल्थ केयर प्रालिले सञ्चालन गर्दै आएको छ। अस्पतालसँगको सम्झौतामा सुरुवातमा १० वटा मेसिनबाट सेवा प्रवाह गरिए पनि बिरामीको चापलाई मध्यनजर गर्दै आवश्यक मेसिनहरू थप गर्ने उल्लेख गरिएको थियो। तर अहिले ८ वटा मेसिन मात्रै सञ्चालनमा छन्। २ मेसिन बिग्रिएका छन्।
डाइलासिसका लागि सेती अस्पतालमा नाम दर्ता गराएका ४५० मध्ये ९५ भन्दा बढिले पालो नपाउँदै ज्यान गुमाएको अस्पताल श्रोतले जनाएको छ। झन्डै १३० जना बिरामी भने सुदूरपश्चिम बाहिर डाइलासिस गराई रहेका छन्।
उपचारको लागी अस्पताल पुग्ने गरेका बिरामी र आफन्तहरूले निकै सास्ती खेप्नु परिरहेको छ। एकतिर डाइलासिसका लागी पालो कुर्नुपर्ने बाध्यता छ भने अर्को तिर डाइलासिस गराउँदा आवश्यक औषधी सम्म अस्पतालको फार्मेसीमा पाइँदैन। निःशुल्क डाइलासिसको लागी सरकारी कार्यालयबाट सिफारिस बोकी अस्पताल पुगेकाहरू पनि चर्को मूल्य तिर्दै निजी मेडिकलहरूबाट औषधी खरिद गर्न बाध्य छन्।
मिर्गौलाको स्थिति जान्नका लागि विशेषज्ञ डाक्टर नै नहुँदा समस्या झन् बढेको छ। छोरीको डाइलासिसका लागी सेती प्रादेशिक अस्पताल पुगेकी चुरे गाउँपालिकाकी रेखा विकले अस्पतालको फार्मेसीमा औषधी नपाइदा निजी मेडिकल धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताइन्। निःशुल्क सेवाका लागी स्थानीय सरकारबाट सिफारिस पत्र बनाएर अस्पताल पुगे पनि आफ्नो लाखौँ रकम खर्च भइसकेको उनको दुखेको छ।
अस्पतालको फार्मेसीमा बिरामीको रगत बढाउने औषधी सम्म नपाइने गरेको उनी बताउँछिन्। अस्पतालका फार्मेसी अधिकृत महेश शाहले पनि डाइलासिसको लागी आवश्यक सबै औषधी फार्मेसीमा नरहेको बताए।
अस्त व्यस्त जीवन शैलीका कारण मिर्गौला सम्बन्धी रोगीहरू बढेका छन्। पत्थरी,मधुमेह,उच्च रक्तचाप र जीवनशैलीका कारण नै मिर्गौला बिग्रने गरेको डा. शेरबहादुर कमरले बताए। यो समस्या बाट बच्न खान पिन तथा जीवन शैलीमा विशेष ध्यान दिनुका साथै नियमित स्वास्थ्य परीक्षण आवश्यक रहेको उनको भनाई छ।
सुदूरपश्चिममा ३० हजारको हाराहारीमा मिर्गौला पीडित रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ। तर मिर्गौलाको उपचारको लागी भने प्रदेश सरकारले कुनै पहल गरेको छैन। सेती अस्पताल बाहेक प्रदेशका अन्य कुनै अस्पतालमा यो सेवा उपलब्ध छैन।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता नरेन्द्र कार्कीले मिर्गौलाको सहज उपचार गराउने व्यवस्था गर्न पहल भइरहेको बताए। मिर्गौलाको फिस्टुला भर्न समेत बाहिर जान नपर्ने गरी गृहकार्य सुरु भइरहेको उनको दाबी छ।
२०७८ असोज ०२ गते ११:४० मा प्रकाशित